Kanneen galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo faa irratti himataman – hoogganoonni Koongiresa Federaalawa Oromoo fi ka biroon, walumaa-galatti, hidhamtoonni 22 mana-hidhaa Qilinxootti hidhamanii jiran, Har’a waaree booda, mana-murtii Federaalaatti dhihaatanii turan. Akka heera sirna federaalaa Itiyoophiyaatti, namni dhimma bulchiisa naannootti himatame, mana-murtii naannoo itti himatame sanaatti yakka-ilaalamuuf mirga qaba. Garuu, Obbo Beqqelee Garbaa faa dhimmi isaanii akka gara mana-murtii Oromiyaatti dabarsamuuf gaafatanii mirga sana dhorkaman, jedhu – Hoogganoonni Kongiresa Federaalawa Oromoo.
Kanneen dhaddacha sanatti argamuun, deemsa yakka-ilaalchaa sana hordofaa turan keessaa tokko – Itti-aanaa dura-taa’aa koongiresa Federaalawa Oromoo – Obbo Mulaatuu Gammachuu ti. Akka dhaddacha sanaa ba’anitti, telefiina harkaa isaanii irratti argadheen ture.